COVID Mhinduro - Hinds Feet Farm
Aya anotevera hutachiona mapuroteni aripo kuti achengetedze nhengo dzedu nevashandi vakachengeteka:
Masiki ari kunodiwa apo mune chero zvivakwa zvedu.
Chekutanga uye chakakosha, kana mushandi achirwara kana asiri kunzwa zvakanaka, vanofanirwa kugara pamba uye zivisa mukuru wavo. Kana zviratidzo zvikamuka uri kubasa, mutariri anofanira kuziviswa.
Vashandi vasati vatanga shanduko, mumwe mushandi anozotora uye kunyora tembiricha yemushandi.
Kupisa kwenhengo kunofanirwa kutorwa zuva nezuva.
Ese ma B/P cuffs uye ma thermometers anofanirwa kucheneswa mushure mekushandisa CHESE.
Vashandi vese vanofanirwa kugeza maoko pavanopinda mumba voenderera mberi nekuchenesa (kugeza maoko, kushandisa sanitizer yemaoko nemagirovhosi) zuva rese. Maoko anofanira kugeza asati abvisa magirovhosi.
Nzvimbo dzese dzakaomarara (makombi emusuwo, madhiri emwenje, ma countertops, midziyo yemagetsi, mabara ekubata, matabletop, medcart inodhonza nemakiyipadhi, komputa keyboard nembeva, nharembozha dzevanhu nedzebhizimusi, nezvimwewo) dzinofanirwa kudzimwa pasi/kucheneswa kaviri pazuva.
Midziyo yese yekudyira (mandiro, maforogo, mapanga, nezvimwewo) inofanirwa kucheneswa mudhishi uye kwete kugezwa nemaoko.
Wachisi wese anofanira kuwachwa pamhepo inopisa.
Mawiricheya anofanirwa kupukutwa pasi/kucheneswa pakuchinja kwehusiku husiku hwega hwega.
Chengetedza 6 tsoka pakati penhengo nguva dzese uye chengetedza chinhambwe chakafanana pakati pevashandi kana usingatarisi nhengo.
Hapana vashanyi vanobvumidzwa mukati medzimba kunze kwevaturikiri vakatenderwa uye mukoti weML. Sezvo mumwe weava vanhu vaviri achipinda mumba, vashandi vanotora uye kunyora tembiricha yavo. Kana fivha iripo, munhu wacho HAACHAVE kubvumidzwa kupinda.
HAPANA VASHANDI VANHU VANOBVIRIRWA MUKATI DZIMBA (vatakuri vemishonga, kuendesa chikafu, nezvimwewo). Zvose zvinofanira kusangana pamusuo uye kutengeserana kunofanira kuitika kunze.
Mhepo Yakachena Yakanakira Isu Tese! Chero bedzi tembiricha yekunze yakapfava, vashandi vanozotora mukana wekuita kuti nhengo dzibude kunze (enda kunofamba uchitenderedza kambasi, gara pavharanda, nezvimwe.)
Vashandi vese vanofanira kutora matanho ekuzvidzivirira kubva kuHinds 'Feet Farm anodiwa kana vari pano panzvimbo.
Chengetedzo idzi zvinokosha kudzora kupararira kweutachiona.
Kuti udzidze zvakawanda nezve nzira yekuzvidzivirira kubva kupararira kwekoronavirus shanyira webhusaiti yeCDC.